LALAO RAVALOMANANA : Nanome torohevitra ny mpino ny FJKM Ambatofotsikely Fahamarinana – MyDago.com aime Madagascar
LALAO RAVALOMANANA : Nanome torohevitra ny mpino ny FJKM Ambatofotsikely Fahamarinana
Niara niombom-bavaka tamin’ireo mpino kristiana tamin’ny faritra andrefana ao anatin’ny sinodam-parintany Atsimon’Ankaratra ny vadin’ny filoha mpanampy Ramatoa Lalao Ravalomanana ny Alahady 09 Jona 2013 .Taorian’izay dia nitsidika ny fiangonana Fjkm Ambatofotsikely ny tenany. Lehibe dia lehibe tokoa ity fiangonana ity satria mahatratra 37 ara be izao ny velaran-tany misy azy. Mahatalanjona ny rehetra mahita azy noho ny halehibeny. Raha ny fanazavan’ny mpitantana ao an-toerana dia ny taona 2010 no nanomboka ny asa izy ireo ary antenainy ho vita amin’ny volana septambra 2014 izany. Ny mahavariana dia ny mpiangona no mizaka manontolo ny ampahany be indrindra amin’ny lany amin’ny fanatanterahana ny asa. Ao anatin’ny fifampitaizana dia tsy ampahalalain’ny mpitandrina azy ireo ny mari-bola enjehina isaky ny dingana fa dia ny ezaka avy hatrany no ifanomezan-tànana. Mahomby kokoa izany araka ny fanazavana satria tsy misy tahana ny mpino amin’ny fanatrarana ny dingana rehetra. Ankoatra ny rakitra ao amn’ny FJKM Ambatofotsikely dia mahavita mitety varavarana manentana ny kristianina ny komity handrosoana hatrany amin’ny fanorenana ny tranon’Andriamanitra. Raha ny tombatombana dia efa mahatratra 200 tapitrisa mahery ny sandan’ny asa rehetra. Mino anefa izy ireo fa ny fitahian’Andriamanitra no hanampy azy ireo amin’izany. Toro-hevitra nomen’I Lalao Ravalomanana, vadin’ny filoha mpanampy FJKM, ny hametrahana mazava ny dingana ho tratrarina rehefa mandom-baravarana. Samy afaka hamantatra izay fandraisana an-tànana mety ho zakany ny tsirairay amin’izay fotoana izay ary hahalala ny fivoaran’ny ezaka ataony amin’ny fahitany ny fizotrin’ny asa.
1 réflexion sur « LALAO RAVALOMANANA : Nanome torohevitra ny mpino ny FJKM Ambatofotsikely Fahamarinana »
Ireto kosa angamba ry foza tsy ampy taona daholo o,mbola tsy afaka mifidy sady ny sasany fitia te hijery fotsiny o.Ty NENY ty koa mahay makarary fo foza an,amboary malaky ny lavaka sao tratra andro eo ka afa-baraka .vehivavy iray miady @ fozalahy 30 mahery, alefa raha mahasahy e sa ahemotra indray…LET’S GO NENY!
Précédent Article précédent : An-tsary ny dian’i Neny ny faran’ny herinandro teo
Suivant Article suivant : ANTSIRABE : MANDRESY I NENY